Löfven oo ka faallooday heshiiskii caqabadda Ukraa'iin ka aloosan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Merkel iyo Hollande ayaa qeexi doona heshiiska lagu gaarey Miniski. Sawirle TT/SR
Löfven oo ka faallooday heshiiskii caqabadda Ukraa'iin ka aloosan
La daabacay fredag 13 februari 2015 kl 09.48
Galab-nimadii arbacada oo uu magaalada Brugsel ka bilowday kulanka hoggaamiyeyaasha dawladaha ku midoobey ururka Midowga Yurub - EU, halkaasina oo waxyaabaha looga wada xaajoon doono ey ka mid yihiin xaaladda cakiran ee Ukraa'iina iyo Ruushka.
Go'aanka hoggaamiyeyaasha EU wuxuu salka ku hayn doonaa war-bixinta ey ka helaan hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo labada madax-weyne ee Ukraa'iin Petro Porosjenko iyo Faransiiska Francois Hollande, kuwaasina oo qayb ka ahaa heshiiskii lagu gaarey magaalada Miniski ee caasimadda dalka Beela-ruushka.
Madaxa dawladda Iswiidhen Stefan Löfven oo ka faallooday amuurtaa ayaa sheegay mar uu wareeysi siiyay laanta wararka idaacadda ee Ekot sidan:
- Wey yar yihiin dad sida Angela Merkel uga faaloon kara wada-haddaaladii. Waa fal lagu qiimeeyo. Heshiiska la gaaray ayaan akhriyay, waxaase iiga muuqday iney jiraan qodobbo u baahan in la caddeeyo. Waana sababta aannu ugu baahannahey inaan dhageeysanno madaxdii kulankaa ka qayb-gashey iyo sida ay u arkaan heshiiskaa, sida uu sheegay Stefan Löfven.